ဖူးနုသဈ: မနီလာ ဒိုငျယာရီ (၃)
သော်တာဆွေ စာအုပ်ထဲမှာ မိုးကုတ်မြမောင်ပဲရစ်ကိုသွားတာ အဲသလိုဘဲ. တစ်ညထဲနဲ့ပေါင်ငါးရာထင်တယ်ရှင်းခဲ့ရတယ် အဲဒီခေတ်က ပညာတေတ်ာသင်တစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး. မိုးကုတ်မြမောင်နဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ပေါ့
သုံးယောက်ထင်တယ်။ ပျော်လိုက်တာဗျာတဲ့။ ကောင်မလေးတွေ ကဝင်လာ ကျွန်တော်တို့က ခြေထောက်နဲ့ထိုး လဲသွားရော သူတို့သယ်လာတဲ့ဗန်းကတည်းက ပန်းကန်တွေလည်းကွဲ. ရယ်နေကြတာဘဲ ရယ်ဘဲရယ်ချင်နေကြတယ် သောက်လဲသောက်ထားတာကိုး ပိုက်ဆံရှင်းတော့ကွဲတာတွေ ပါထည့်ရှင်းရတာပေါ့။
သော်တာဆွေက စိတ်ဆိုးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမပါလိုက်ရလို့။
ZT ကော တောက်မခေါက်လိုက်ဘူးလား။
ကဲတဲ့ထဲ သူမပါသလိုလို ရေးထားတယ်နော်..လူလည်.. ကဇက်တီ
သို့သော် ကျားဟာကျားပါပဲလို့ ဖြောင့်ချက်ကို မသိမသာရေးထားတယ်။
ဘန်ကောက်ကဟာတွေကတော့ ဆေးလိပ်သောက်ယုံမကဘူး မျှားပစ်၊ ဘလိပ်ဒါးထုတ်ဝ ပန်းချီဆွဲ ငှက်ပျောသီးစား အကုန်တတ်တယ်
အဲသလိုဆိုတော့ ကိုZT သမာဓိ အတော်ကောင်း၊ စိတ်အတော်ခိုင်ပေတာပဲ....သာဓု သာဓု...:)
ဇာတ်ကွက်ကို နည်းနည်း လှည့်ထားမှန်း ရိပ်မိနေတယ်။
အမှန်အတိုင်းရေးတောင် မယုံကြပါလား။ :)
မနီလာမှာ နယ်ခံနှင့်သွားရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ၊ ပျော်စရာကောင်းခဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် ဘန်ကောင်ကို ပိုကြိုက်တယ်၊ မနီလာမှာ နောက်ကျောက ယားတလိုလို ခံစားရတယ်၊ တိုးရ် နဲ့သွားတဲ့ ဟောင်ကောင်တွေခံလိုက်ရတယ်၊
ဒီမယ်... ဘာမှ မဘာခဲ့လဲ မြင်ခဲ့ရတာနဲ့ တန်ပါတယ် ...(ဟမ်)
မဂန်သာ ဥမာဂါ ဆိုတာ Good Morning
မဆွန်းငိဆိုတ ur naughty
မှတ်မိတဲ့ စာလုံးတွေ ကျန်သေးတယ်ဗျ
ကျနော်တို့ သွားခဲ့ဖူးတဲ့ ယိုးဒယားပက်ပုန်းညလေးကို သတိရသွားစေတယ်.
ကိုဇက်တီက ဖိုက်တင်းဘောမှ စားမသွားတာနော်..